XOG MUHIIM AH+AKHRISO: Qodobada ay isku fahmi la’a yihiin Guddiga Hirgalinta Xabad Joojinta magaalada Gaalkacyo? - Hablaha Media Network
XOG MUHIIM AH+AKHRISO: Qodobada ay isku fahmi la’a yihiin Guddiga Hirgalinta Xabad Joojinta magaalada Gaalkacyo?
HMN:- ayaa ogaaday in uu jiro Is faham darro soo kala dhex-galey guddiyada Hirgalinta Xabad Joojinta Gaalkacyo ee maamulada Puntland & Galmudug, ka dib markii ay yeesheen kulamo aan toos aheyn oo ay uga hadleen sidii xal kama dambeys ah arrimaha dagaalada looga gaari lahaa.
Guddiga Galmudug waxay sheegeen in xabad joojintan la hirgalin karro oo kaliya, in la fuliyo qodobadan.
In la joojiyo dhismayaasha ka socda Galbeedka Gaalkacyo ee laga dhisayo dhulka lagu muransan yahay.
In ciidamada Puntland laga qaado Dooxada Galbeedka ee magaalada Gaalkacyo oo ah halkii ay ka dhaceen dagaaladii u dambeeyey.
In Wada hadalada Xaaladda Gaalkacyo lagu galo habka Siyaasada, oo ay Odayaashu noqdaan kuwa guddiyadaas qeyb ka ah.
Goobaha ay ka tagtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaana Ilaha dhaqaalaha ay noqdaan kuwa ugu horeeya ee laga wada hadlo.
In arrimaha dhulalka ee beelaha hoose u dhaxeeya xalkoodu uu noqdo midkii horey loo gaaray
Garbahaareey.com ayaa xog ku helay in ay Ergada Puntland si cad u diideen qodobadan Galmudug soo qadintay, marka laga reebo qodobka ugu dambeeya ee ah dhulalka sida caadiga ah lays kugu haysto oo ay maxkamado damani ah kala xukumeen.
Guddiga Hirgalinta xabad joojinta ee Puntland waxay sheegeen in aysan qaadi doonin wax ciidan ah, sidaas oo kalena aysan joogsan doonin dhismaha Saylada Ganacsiga ee laga wado duleedka magaalada Gaalkacyo.
Puntland ayaa qabta qodobada kala ah.
In ciidamadeeda aysan ka qaadi doonin goobaha ay kusugan yihiin oo ay tahay dhulkaa dhul Puntland ay leedahay.
In wada xaajoodyada loo daayo Gaalkayo oo ay wada fariistaan Odayaasha dhaqanka ee labada dhinac.
In aan marnaba laga wada hadli karin Kaabayaasha dhaqaalaha, maadaama Soomaaliya markii ay dhacday qolo kasta gobalkeeda gaar u yeelatay iyo meelaha ay degan yihiin.
In aan la joojineyn dhismaha Saylada Ganacsi oo uu yahay mid fure u ah Isku xirka Ganacsiga Ummadda Soomaaliyeed, sidaas oo kalena ah mid xakameynaya dhaqdhaqaaqyada kooxaha xagjirka ah.
In aysan Puntland cidna gorgortan kala galleyn horumarinta deegaanadeeda oo ay sii labo-jibaarayaan.
Qodobadan ayaa ah kuwa ay labada dhinac si adag u kala taagan yihiin, waxaana xasuus mudan in Ergada Beesha Caalamka & Ra’iisulwasaare Sharmaake labaduba ay kulamadii ay la qaateen dhinacyada si toos ah looga wada hadlay arrimahan oo aan waxba xal ah laga gaarin.